Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.6.1 Nangataka fangatahana
Amin'ny fangatahana nangatahana, ny angona fanadihadiana dia manangana fifandraisana manodidina ny loharanom-baovao lehibe iray izay misy famaritana lehibe nefa tsy misy ny hafa.
Ny fomba iray hanangonana ny angona fanadihadiana sy ny loharanom-baovao lehibe dia dingana iray izay hiantso ny fangatahana nangonina . Amin'ny fangatahana nangatahana, loharanom-baovao lehibe iray dia misy fandrefesana lehibe saingy tsy misy fandrefesana hafa ka ny mpikaroka dia manangona ireo refy tsy hita ao anaty fanadihadiana ary avy eo dia mampifandray ireo loharano roa ireo. Ohatra iray amin'ny fangatahana nangatahina ny fianarana nataon'i Burke and Kraut (2014) momba ny fifandraisana amin'ny Facebook hampitombo ny herin'ny fisakaizana, izay noresahiko tao amin'ny fizarana 3.2). Amin'io tranga io, i Burke sy Kraut dia nampifandraisina ny angona fanadihadiana amin'ny rakitra ao amin'ny Facebook.
Ny fiasa izay niasan'i Burke sy Kraut anefa dia midika fa tsy voatery hiatrika olana lehibe roa izy ireo, izay ahitan'ny mpikaroka manao fangatahana mangataka matetika. Voalohany, raha ny marina dia mampifandray ny angona angon-drakitra tsirairay, dingana iray antsoina hoe fifandraisana firaketana , dia mety ho sarotra raha tsy misy mpamaritra miavaka ao amin'ny loharanom-baovao azo ampiasaina mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara ny rakitsoratra marina amin'ny daty iray ao amin'ny daty hafa. Ny olana lehibe faharoa amin'ny fangatahana angovo dia ny faharetan'ny loharanom-baovao lehibe dia mety ho sarotra amin'ny mpikaroka ny manombantombana satria ny dingana izay namoronana ny angona dia mety ho tompony ary mety ho mora amin'ny maro amin'ireo olana voalaza ao amin'ny toko faha-2. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fangatahana nangatahana dia matetika hampidirina ny fifandraisana mivelatra amin'ny fanadihadiana momba ny loharanom-baovaon'ny mainty momba ny tsy fantatra. Na dia eo aza izany olana izany, ny fangatahana mampitombo dia azo ampiasaina hanatanterahana fikarohana lehibe, araka ny nasehon'i Stephen Ansolabehere sy Eitan Hersh (2012) tamin'ny fikarohana nataon'izy ireo momba ny fandrotsaham-bato ao Etazonia.
Ny fizotry ny fifidianana dia nokarohina tamin'ny fikarohana siantifika politika, ary tamin'ny lasa, ny fahatakaran'ny mpikaroka ny hoe iza no mifidy ary ny antony dia mifototra amin'ny fanadihadiana ny angona fanadihadiana. Ny fifidianana any Etazonia anefa, dia fitondran-tena tsy fahita firy izay nanoratana ny governemanta raha nifidy ny olom-pirenena tsirairay (mazava ho azy, ny governemanta dia tsy manoratra hoe iza no olon'ny olom-pirenena tsirairay). Nandritra ny taona maro, ireo taratasy firaketana amin'ny governemanta dia azo jerena amin'ny endrika taratasy, niparitaka tany amin'ny biraom-panjakana isan-karazany manerana ny firenena. Sarotra be izany, saingy tsy azo tanterahana izany, ho an'ireo mpahay siansa politika manana ny sarin'ny mpifidy ary hampitaha izay lazain'ny olona amin'ny fanadihadiana momba ny fifidianana amin'ny tena fihetsika hifidy (Ansolabehere and Hersh 2012) .
Saingy ireo antontan-kevitra momba ny fifidianana ireo dia efa nalaim-bola ary misy orinasa tsy miankina maromaro no nanangona sy nanambatra azy ireo mba hamokarana rakitra matihanina manan-danja izay ahitana ny fifidianan'ny amerikana. Ansolabehere sy Hersh dia niara-niasa tamin'ny iray amin'ireo orinasa ireo-LCC-Catalistika-mba hampiasa ny lahatsoratry ny fifidianana mba hanampy amin'ny famolavolana sary tsara kokoa ny mpifidy. Ankoatra izany, satria niankina tamin'ny firaketana nomerika nangonina sy nikarokarin'ny orinasa iray izay nametraka loharanom-panazavana betsaka momba ny fanangonana sy ny fampifanarahana angona ny fianarany, dia nanome tombontsoa maro ho an'ny ezaka teo aloha izay natao tsy misy fanampiana avy amin'ny orinasa ary amin'ny fampiasana rakitra analoga.
Tahaka ny ankamaroan'ny loharanom-baovao lehibe ao amin'ny toko faha-2, ny rakitra maoderin'ny katalista dia tsy ahitana ampahany betsaka amin'ny fampahalalam-baovao, fitondran-tena sy fitondran-tena izay nilain'i Ansolabehere sy Hersh. Raha ny tena marina, tena liana izy ireo nampitaha ny fitondran-tena mifototra amin'ny fifidianana amin'ny fanadihadiana miaraka amin'ny fitondran-tena mifidy (ie, ny vaovao ao amin'ny datin'ny Catalist). Koa nangonin'i Ansolabehere sy Hersh ny angona tiany ho fanadihadiana ara-tsosialy lehibe, CCES, voatonona tato amin'ity toko ity. Avy eo dia nomeny ny Catalans ny angona nomeny, ary nomen'ny Katalista azy ireo ny antontan-dahatsary voarakitra miaraka amin'ny fitondran-tena mifehy (avy amin'ny Catalist), ny fihetsiketsehana mifototra amin'ny tena (avy amin'ny CCES) sy ny demografika ary ny toe-tsain'ireo mpanadihady (avy amin'ny CCES) 3.13). Amin'ny teny hafa, ny Ansolabehere sy Hersh dia nampifangaro ny antontan-kevitra momba ny fifidianana miaraka amin'ny angona fanadihadiana mba hanaovana fikarohana izay tsy mety amin'ny loharanom-baovao tsirairay.
Sary 3.13: Famaritana ny fianarana nataon'i Ansolabehere and Hersh (2012) . Mba hamoronana datafile maoderina, ny Katalista dia mampifandray sy mampifanaraka ny vaovao avy amin'ny loharano samihafa. Io dingam-pivoarana io, na dia mitandrina aza, dia hanaparitaka ny fahadisoana ao amin'ny loharanom-baovao fototra ary hampiditra fahadisoana vaovao. Ny loharanom-pahamarinana faharoa dia ny fifandraisana eo anelanelan'ny fanadihadiana sy ny datafile master. Raha misy olona manana mari-pamantarana mendri-pitokisana sy miavaka amin'ny loharanom-baovao, dia tsy ho trivial ny fifandraisana. Saingy, ny katalaogy dia tokony hanao ny fifandraisana amin'ny fampiasana ny anarana tsy lavorary, amin'ity tranga ity, ny lahy sy ny vavy, ny taom-pitaovana, ary ny adiresy an-trano. Mampalahelo fa amin'ny tranga marobe dia mety ho tsy feno na tsy marina ny fampahalalana; Ny mpifidy iray antsoina hoe Homer Simpson dia mety ho toa an'i Homer Jay Simpson, Homie J Simpson, na Homer Sampsin. Na dia teo aza ny mety ho fahadisoana amin'ny dataafile tompon'ny Katalista sy ny fahadisoana ao amin'ny firaketana an-tsoratra, dia afaka nanangana ny fahatokisany amin'ny tombantombany amin'ny alalan'ny karazana karazana karazana maro i Ansolabehere sy Hersh.
Miaraka amin'ny antontan-taratasim-pifaneraseran'izy ireo, dia nahitana fanatsoahan-kevitra telo i Ansolabehere sy Hersh. Voalohany, manjavozavo ny tatitra momba ny fifidianana: efa ho ny antsasaky ny tsy mpifidy no nitifitra ny fifidianana, ary raha misy olona mitoroka ny fifidianana, dia tsy misy afa-tsy 80% ny vintana azon'izy ireo nifidy. Faharoa, ny tatitra an-tserasera dia tsy mahasamihafa: mahazatra kokoa ny mpitsoa-ponenana mahakasika ny vola miditra sy marefo, izay mandray anjara amin'ny raharaham-bahoaka. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ireo olona izay te-hifidy dia mety handainga amin'ny fifidianana ihany koa. Fahatelo, ary indrindra indrindra, noho ny endriky ny fizotran'ny tatitra, ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpifidy sy ny tsy mpifidy dia ambany noho ny fanadihadiana fotsiny. Ohatra, eo amin'ny 22 isan-jaton'ireo izay manana ny mari-pahaizana licence dia azo inoana kokoa ny mitatitra ny fifidianana, fa ny 10 isan-jaton'ny hevitra ihany no mety hifidy. Raha ny zava-misy, angamba tsy mahagaga, fa tsara kokoa ny teorinan'ny resadresaka momba ny fifidianana raha toa ka milaza ny hoe iza no hitatitra ny fifidianana (izay ny angom-baovao nodinihan'ireo mpikaroka taloha) noho ny faminaniany hoe iza marina no mifidy. Noho izany, ny fikarohana ara-tsiansa momba ny Ansolabehere and Hersh (2012) miantso teoria vaovao hahatakatra sy haminavina ny fifidianana.
Nefa firy no tokony hatokisantsika ireto vokatra ireto? Tadidio fa ireo vokatra ireo dia miankina amin'ny famakian-teny diso momba ny angona mainty hoditra miaraka amin'ny hadisoana tsy fantatra. Amin'ny ankapobeny, ny valiny dia miankina amin'ny dingana roa lehibe: (1) ny fahaiza-manaon'ny Catalist mba hampifandraisany loharano maro samihafa ahafahana mamokatra datafile tena marina ary (2) ny fahafahan'ny Catalista hampifandray ny angona fanadihadiana ao amin'ny datafile masiny. Ny tsirairay amin'ireo dingana ireo dia sarotra, ary ny fahadisoana amin'ny dingana roa dia mety hitarika ireo mpikaroka amin'ny fehin-kevitra diso. Na izany aza, ny fanodinana ny rakitra sy ny fifandraisana dia manakiana ny fisian'ny Catalistana ho toy ny orinasa iray, ka afaka mametraka ny loharanom-pahefana amin'ny famahana ireo olana ireo izy ireo, matetika amin'ny ambaratonga izay tsy ahitan'ny mpikaroka academic. Ao amin'ny taratasiny, i Ansolabehere sy Hersh dia nanao dingana maromaro hanamarinana ny vokatr'ireo dingana roa ireo-na dia misy aza ny sasany amin'izy ireo - ary mety hanampy ireo mpikaroka hafa haniry hampifandray ireo fanadihadiana amin'ny angona mainty mainty loharanom-baovao.
Inona ireo lesona ankapobeny azon'ny mpikaroka avy amin'ity fandalinana ity? Voalohany, sarobidy be ny fampiroboroboana loharanom-baovaon-drakitra maro miaraka amin'ny angona fanadihadiana ary amin'ny fampitomboana ny angona fanadihadiana amin'ny loharanom-baovao lehibe (azonao jerena ity fianarana ity). Amin'ny fampifangaroana ireo loharano roa ireo, ireo mpikaroka dia afaka nanao zavatra tsy vitan'ny tsirairay. Ny lesona ankapobeny dia ny tsy tokony ho raisina ho "fahamarinana marina", raha toa ka tsy azo raisina ho loharanom-baovaon-drakitra, na ny angona avy amin'ny Catalist, dia mety ho ilaina. Ny skeptika indraindray dia mampitaha ny loharanom-baovao azo antoka sy ara-barotra miaraka amin'ny Fahamarinana tanteraka ary manondro fa ireo loharanom-baovao ireo dia lavina. Na izany aza, amin'ity tranga ity, ireo manakorontana dia manao fampitahana diso: ny angona rehetra ampiasain'ny mpikaroka dia tsy mahatratra ny fahamarinana marina. Fa kosa, tsaratsara kokoa ny mampitaha loharanom-baovao azo antoka sy ara-barotra miaraka amin'ireo loharanom-baovao hafa (ohatra, ny fitondrantena mifototra amin'ny tenanao), izay mety amin'ny fahadisoana ihany koa. Farany, ny lesona ankapobeny momba ny Ansolabehere sy ny fianarana Hersh dia amin'ny toe-javatra sasany, ireo mpikaroka dia afaka mandray soa avy amin'ny fampiasam-bola goavana ataon'ny orinasa maro samihafa amin'ny fanangonana sy fanarahamaso ireo angona sosialy sarotra.